Thursday, 22 September 2011 17:18	नागरिक
मनोज घर्तीमगर- सानो चौरमा खेल्न सकिने भलिबल नेपालको लोकप्रिय खेल हो। अझ महिला भलिबललाई खेलप्रेमीले बढी माया गरेका छन्। नेपाली महिला भलिबलमा लामो समयदेखि पोखरेली टिमको वर्चस्व रहँदै आएको छ। नेपाल पुलिस क्लब र पोखराको ज्ञानुबाबा उच्च मावि भलिबलका बलिया टिम हुन्। नेपालमा हुने विभिन्न पोखरेली टिम सधैँ आफ्नो दबदबा कायम राख्न सफल हुने गरेको छ।
Thursday, 22 September 2011 13:28	नागरिक
किशोर नेपाल- ठूलो भुइँचालो गएको २३ वर्षपछि फेरि गयो भुइँचालो। २०४५ सालमा पनि पूर्वबाटै सुरु भएको थियो भुइँचालो। २०६८ सालमा पनि पूर्बवाटै सुरु भयो। त्यतिबेला भुइँचालो भदौले छुनासाथ गएको थियो, हजार मरेका थिए, धरान ध्वस्त भएको थियो। बेलायती सरकारले हर्क्युलिस जहाजमार्फत उद्धार सामग्री पठाएर नेपालीको घाउमा मल्हमपट्टी लगाएको थियो।
Thursday, 22 September 2011 13:36	नागरिक
अनिता शिवकोटी/ स्वरुप आचार्य- पैसा हुनेकालागि शहर बजारमा सधै दशैं छाएपनि कम पैसा हुनेका लागि दशैं उपहारको बहार बोकेर आएको छ। जताततै बजार छ, जताततै उपहार छ। पाडो किन्नुहोस, भैँसी उपहारमा राखिएको छ, चप्पल किन्नुहोस, कुखुराको भाले दशैंमा पर्सिन तयार छ। उपहारको यो विगविगीमा के साँचो हो र के झुठो हो?
Thursday, 15 September 2011 13:24	नागरिक
नेपालमा यति बेला कि गुँदपाक चम्केको छ कि सौन्दर्य। गुँदपाकको व्यापार छानविनको दायरामा परे पनि सौन्दर्यका व्यापारीहरू इज्जतका साथ घुमिरहेका छन्। विभिन्न प्रतियोगिताको माला लगाएर। सौन्दर्य प्रतियोगिताभित्र चलेको कालो व्यापार :
Thursday, 15 September 2011 12:09	नागरिक
किशोर नेपाल- कान्छा काका मन्त्री हुनु भएको खुशीमा झापादेखि दौडादौड गरेर सरिना काठमाडौं आइपुगेकी पनि पन्ध्रदिन वितिसक्यो। यो पन्ध्रदिनमा उसको काम केही हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीसंग अमेरिकाको न्यूयोर्क शहर जान आफैं घोर-घमासान संघर्षमा व्यस्त रहेका मन्त्री काकासंग उसको राम्ररी कुरै हुन पाएको छैन। काकाको विहे भएको छैन। सानैदेखि राजनीतिमा लागेका हुन।
Thursday, 08 September 2011 18:40	नागरिक
राजन नेपाल/स्वरूप आचार्य- काठमाडौँ। जति बेला सिएनएन हिरो अनुराधा कोइराला गएको मंगलवार चेलीवेटी बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय र्‍यालीको नेतृत्व गर्दै थिइन्, त्यति बेला हामी कथित मनोरञ्जन उद्योगका एकजना दलालसँग दुबई, मलेसिया र दक्षिण अफ्रिकाका डान्सबार र डिस्कोथेकहरूमा नाच्नपुग्ने नेपाली केटीहरूको वृत्तान्त सुन्दै थियौँ। मुम्बइको कमाठीपुरा, कोलकाताको सोनागाछी र दिल्लीको जीबी रोडबाट पर दिनहुँ कसरी पुग्दैछन् नेपाली चेलीहरू? सूचनाको गोपनीयता भंग नगर्ने सर्तमा हामीले पाएका जानकारी डरलाग्दा थिए।